Kenya oo Xirtay qaar kamid ah Xawaaladaha Soomaalida – Radio Daljir
Abriil 8, 2015 9:36 b 0
Arbaco, Abriil 08, 2015 (Daljir) —Wasiirka arrimaha gudaha ee wadanka Kenya oo lahadlayey warbaahinta wadankaasi ayaa shaaciyey in dowladda Kenya ay xirtay 86 Account iyo 13 xawaaladood oo ay lahaayeen dadka Soomaaliyeed ee dalkaasi Kenya, inkastoo wasiirku uusan shaacin magacyada dadkaasi.
Dowladda dalka Kenya ayaa sheegtay in tallaabadaani ay ka dambaysay kadib markii shaqsiyaadka lahaa Accounadaasi iyo xawaaladaha laxanibay lagu eedeeyey inay taageeri jireen ururka Alshabaab inkastoo aysan jirin wax dacwad ah oo lagu soo oogey dadkaasi.
Kadib weerarkii Jaamacada Gaarisa ayaa waxaa dowladda Kenya u saartay gudi gole wasiiro Kenyan ah inay baaritaan ku sameeyaan dhaqdhaqaaqyada Alshabaab ee gudaha Kenya, waxaana la aaminsan yahay in xayiraadani ay ka dhalatay baaritaankii gudigaasi uu sameeyey.
Mas’uuliyiinta xawaaladaha laxanibay ayaa beeniyey eedaymaha loohaysto ee ah inay taageero dhaqaale siiyaan ururka Alshabaab oo weeraro qorshaysan ka geystey gudaha wadankaasi Kenya, waxaana uu sheegay inaysan wax xiriir ah lalahayn Alshabaab.
Madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha wadanka Soomaaliya ayaa kazoo horjeestey falkaasi waxaana ay sheegeen in xawaaladuhu ay u adeegi jireen dad masaakiin ah oo aan waxba galabsan, waxaana ay Kenya ka codsadeen inay arrintaasi baaritaan dheeraad ah ku samayso.
Madaxda Soomaalida ah ee Kenya ayaa soo jeediyey in dalkaasi laga saaro qaxootiga Soomaaliyeed maadaama ay ku eedeeyeen in xeryaha Qaxootiga Alshabaab ay kazoo duulaan, laakiin arrintaasi mahan mid macquul ah maadaama Kenyanka dhexdooda ay arrintu tahay oo dhamaan ragii fuliyey weerarkii Gaarisa ay ahaayeen Soomaali Kenyan qaarkood rag madax ah dhaleen.
Shirka lagu dhisayo Maamulka Gobollada Dhexe oo loo Qorsheeyay in lagu qabto degmada Cadaado